Maitiro ekuchenesa mapakeji muArch Linux | Linux Vakapindwa muropa
Iko kushandiswa kwenzvimbo muGnu / Linux chimwe chinhu chakanyanya kubatsira, chakakosha zvekuti mafoni emafoni akabatsirwa kubva mukuita uku uye mamwe marongero ehurongwa hwekushandira akadai seMicrosoft ari kuyedza kuzviita. Nekudaro, payakaitwa muGnu / Linux, iyo yekubatanidza yeInternet yainonoka uye kwete kungovapo shanduro dzakawanda sezvazviri parizvino.
Izvi zvinogadzira izvo munguva pfupi, chero kugoverwa kweGnu / Linux, inozadzwa nemapakeji uye mafaera echinyakare uye asingashandiswe nesisitimu yekushandisa. Mamiriro ezvinhu dzimwe nguva akanyanyisa uye kumwe kuisirwa kunogona kuzadza iro rakaomarara dhiraidhi nemapakeji kana akachengetedzwa mapakeji
Ndokusaka maturusi ekugadzirisa ari kuwedzera kuwanda, asi ichokwadiwo kuti kugoverwa kweGnu / Linux pachavo kunoongorora mabasa ekuchengetedza. Nhasi tave kuzokudzidzisa iwe maitiro ekujekesa cache pane zvekugovera zvinoshandisa Pacman.
Iyo Pacman chishandiso yakajairika yeArch Linux, asi iripowo mune zvinogoverwa zvinovakirwa paArch Linux senge Manjaro. Mukuburitsa kwekuburitsa seArch Linux, kuchenesa mapakeji asina basa kwakakosha. Kune izvi isu toshandisa mirairo miviri inonzi Paccache uye Pacman -Sc. Aya maturusi ane mabhenefiti avo uye avo asina kunaka mapoinzi, chimwe chinhu chatinozoona chinotevera.
Mune iyo terminal inoitwa seinotevera:
Izvi zvinokonzeresa Arch Linux kuburitsa mapakeji ayo ese kunze kwekupedzisira matatu mavhezheni. Chinhu chinobatsira kana iyo yazvino vhezheni ikaunza matambudziko kana kana tichida kudzoreredza pasuru. Isu tinofanirwa kuratidza kuti kazhinji kuchenesa kwemapakeji kunoenderana funga kuchenesa akaisa, kurodha pasi uye kusunungura mapakeji. Inofanirwa kutariswa kuitira kana tichida kuisa iyo package yatakabvisa gare gare. Mune ino kesi, sezvatareva, matatu ekupedzisira maBhaibheri achasara.
Uyu Pacman raira iri zvinobatsira asi hazvisiyi chero kopi kana chero package yechirongwa. Inoita yekuchenesa zvakaringana uye ndiyo njodzi irimo mukushandisa chishandiso ichi. Kuitwa kwemurairo uyu kunotevera:
Ichi chishandiso hachizonatsa izvo zvatakaisa mukugovera, saka ichasiya kugovera kwedu kwakakwidziridzwa uye nenzvimbo yakanyatsodiwa kuisa zvirongwa zvitsva kana mapakeji.
Izvi hazvireve kuti isu tinoshandisa mamwe maturusi akazvarwa kutsvagisa kugovera kwedu, asi kana tisingade kushandisa maturusi aya kana zvakapusa iwe unongoda kujekesa cache yeArch Linux, iyi Pacman mirairo yakakodzera Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Maitiro ekuchenesa mapakeji muArch Linux